Soomaaliya oo ka qeyb gelaya tartanka doorashada Madaxweynaha Chess-ka Adduunka
Saturday July 19, 2014 - 22:11:33 in Wararka by
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga Md. Axmed Cabdi Xasan Wataac ayaa ka warbixiyay socdaal uu 1-da bisha Agosto ku tegayo magaalada Toromso ee wadanka Norway, halkaasi oo uu ka dhacayo shirweynaha caalamiga ah Chess-ka Adduunka.
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga Md. Axmed Cabdi Xasan Wataac ayaa ka warbixiyay socdaal uu 1-da bisha Agosto ku tegayo magaalada Toromso ee wadanka Norway, halkaasi oo uu ka dhacayo shirweynaha caalamiga ah Chess-ka Adduunka. Waxa uu sheegay inuu casuumaad ka helay ururka Chess-ka adduunka si uu uga qeyb galo tartanka doorashada Madaxweynaha Chess-ka Adduunka, iyadoo dalka Norway ay ku sii qulqulayaan musharaxiinta, hay'adaha chess-ka ee ka kala socda wadamada caalamka.
"Anigoo Soomaaliya u matalaya dalalka caalamka ee ka qeyb gelaya doorashada Madaxweynaha Chess-ka adduunka waxaan codkeyga siinayaa musharaxii ka shaqeynaya barnaamijyo lagu horumarinayo Chess-ka Soomaaliya iyo kan Adduunka" ayuu yiri Guddoomiye Wataac.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliya Axmed Cabdi Xasan Wataac ayaa sheegay in ciyaartoyda Soomaaliyeed ee Shataraniga ay ka baaqanayaan tartanka ciyaaraha Chess-ka Adduunka oo afartii sanaba mar la qabto, bacdamaa sida uu sheegay ay dib ugu dhaceen arrimo dhaqaale oo khuseeya safarka ay ku tegi lahaayeen magaalada Toromso ee dalka Norway.